ယူနီကုဒ်လား? ဇော်ဂျီလား? | Myanmar Tech Press
2017-04-03 2018-04-06 Admin ဇော်ဂျီ, နည်းပညာ, ယူနီကုဒ်
Image Source: https://itunes.apple.com/us/app
လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ယူနီကုဒ်ထက်ဇော်ဂျီဖောင့်ကိုပဲ အများဆုံးအသုံးပြုလျက်ရှိကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ၀က်ဘ်ဆိုဒ်တွေနဲ့ အခြားလူမှုကွန်ယက်တွေမှာလည်း ဇော်ဂျီဖောင့်ကိုပဲ အသုံးပြုတာတွေများနေတော့ မိမိတို့ device တွေမှာဇော်ဂျီဖောင့်ကိုမသွင်းထားရင်တော့ အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး။
နိုင်ငံတော်အစိုးရက ယူနီကုဒ်ကိုပဲ အားလုံးတပြေးညီ အသုံးပြုကြဖို့ ညွှန်ကြားထားတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း အင်တာနက်အသုံးပြုသူ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတော့ ဇော်ဂျီဖောင့်ကိုပဲ အသုံးပြုနေကြတဲ့အတွက် တော်ရုံနဲ့တော့ ဒီကိစ္စကိုပြောင်းလဲဖို့ လွယ်မယ်မထင်ပါဘူး။ ကီးဘုတ်ပေါ်ရှိလက်ကွက်တွေက မတူညီကြတတာကြောင့် ဇော်ဂျီဖောင့်အသုံးပြုနေသူတွေအနေနဲ့ ကြီးမားတဲ့အဆင်မပြေမှုမျိုးတွေ မကြုံတွေ့ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ ယူနီကုဒ်ကိုအလွယ်တကူ ပြောင်းလဲနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
ယူနီကုဒ်ကတော့ ပုံမှန်သုံးနေကြဆိုပေမယ့်လည်း PC, Tablet, Smart Phone တို့ပြောင်းသုံးခြင်းကတစ်ပတ်ပြန်လည်လာတဲ့အထိ နည်းပါးတာနဲ့အညီ နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ဇော်ဂျီဖောင့်မသုံးဘဲဖြစ်သွားမှာတော့ မဟုတ်နိုင်ပါဘူး။
၀က်ဘ်ဆိုဒ်တွေကို ဖန်တီးတဲ့အခါမှာ ဒီဖောင့်နှစ်မျိုးကြောင့် ပြဿနာအချို့ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
အဲဒါတွေကတော့ (၁) ယူနီကုဒ်အသုံးများလာပြီး ယူနီကုဒ်နဲ့ပဲ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်တွေကိုလုပ်ကြမယ်။ (၂) ဇော်ဂျီဖောင့်မှတစ်ဆင့် ယူနီကုဒ်သို့ပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာ အချိန်အားဖြင့် အတော်အတန်ကြာဦးမှာမို့ ဇော်ဂျီဖောင့်နဲ့ပဲ၀က်ဘ်ဆိုဒ်တွေကိုလုပ်ကြမယ်။ (၃) ယူနီကုဒ်နှင့်ဇော်ဂျီနှစ်မျိုးလုံးဖြင့် ၀က်ဘ်ဆိုဒ်တွေကိုလုပ်ကြမယ်။
အထက်ပါအချက် ၃ ချက်အနက် နံပါတ်(၁) အချက်သာလျှင် ယူနီကုဒ်ကိုအားလုံးတပြေးညီ အသုံးပြုရေးကို ကူညီပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ကျန်တဲ့နှစ်ချက်ကတော့ ဇော်ဂျီဖောင့်မှယူနီကုဒ်သို့ ကူးပြောင်းခြင်းအား အဟန့်အတားသဖွယ်ဖြစ်လို့နေပေလိမ့်မယ်။
ကွန်ပျူတာတွေမှာ အခြေခံအားဖြင့် Device Font အနေနဲ့ ယူနီကုဒ်က အသင့်ရှိနေတတ်ကြပါတယ်။ ဇော်ဂျီဖောင့်ကသာ တကူးတကထပ်ထည့်ရတာမျိုးပါ။ တကယ်လို့ဇော်ဂျီဖောင့်မထည့်ထားတဲ့ ကွန်ပျူတာတစ်လုံးဆိုပါစို့၊ အဲ့လိုကွန်ပျူတာတစ်လုံးအဖို့တော့ ဇော်ဂျီဖောင့်သုံးထားတဲ့ စာပုဒ်မျိုးတွေဆို ဖတ်လို့ရမှာ မဟုတ်ဘူးလေ။ အဲလိုဖြစ်ပြီဆို ဖောင့်ချိန်းတဲ့ Converter တစ်ခုကို အားကိုးမှပဲရပါတော့မယ်။ ဒါကလည်းသာမန် Text နဲ့ Notepad တွေလောက်ကိုပဲ အလွယ်တကူဖြေရှင်းနိုင်မှာပါ။ ၀က်ဘ်ဆိုဒ် (သို့) အခြားလူမှုကွန်ယက်တွေထဲက ဇော်ဂျီဖောင့်သုံးစာပုဒ် တွေဆိုရင်တော့ အလုပ်ရှုပ်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားပါပြီ။ ဒါ့ကြောင့် အခုလိုဇော်ဂျီဖောင့် အသုံးများနေသေးတဲ့ အနေအထားမျိုးမှာတော့ မိမိတို့ကွန်ပျူတာတွေထဲမှာ ယူနီကုဒ်နဲ့ဇော်ဂျီဆိုတဲ့ ဖောင့်နှစ်မျိုးလုံး ရှိနေဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်။
← MYANMAR INTERNATIONAL ECOMMERCE EXPO 2017 သို့ ရောက်ခဲ့ရာ၀ယ်
ရန်ကုန်မြို့အတွက်မရှိမဖြစ် Taxi ၀န်ဆောင်မှု →